I-Cardano igcina i-Bearish Momentum Ukususela ekuqalisweni kwe-Alonzo Mainnet
Ngaphandle kwemizobo yangaphambili yerekhodi ephezulu ngamanye ama-cryptocurrencies aphezulu, ICardano (ADA) iyaqhubeka nokuzabalaza ukurekhoda amanyathelo abalulekileyo, nangona kuphunyezo lwakutsha nje lwe-Smart Contracts ukuhambelana kwinethiwekhi.
Ngomhla wesi-2 kuSeptemba, i-ADA yashicilela irekhodi elitsha eliphezulu kwi-3.160 yeedola, isondeza ixabiso layo lemarike ekugqithiseni i-100 yeebhiliyoni zeedola. Nangona kunjalo, ixabiso lihleli kumnqantsa ukusukela oko, ngaphandle kwamaza enkunzi ngamaxesha athile kwimarike ebanzi.
Kancinci ngaphezu kweveki emva kokubona okuphezulu kwe-3 ye-$, i-Input Output Hong Kong (IOHK)-iqela elisemva kweCardano-liqinisekisile ukuthunyelwa ngempumelelo kwe-Alonzo mainnet upgrade. Olu hlaziyo lwazisa ukuhambelana kweSivumelwano se-Smart kwinethiwekhi ngesakhelo sePlutus. Esi sibhengezo sanika i-ADA ipompo encinci kwindawo ye-$ 2.7, kodwa ixabiso liphinde laqala uhambo lwayo lwe-bearish kwiintsuku ezimbalwa kamva.
Oko kwathiwa, i-ADA iye yahlala ekunciphiseni ngokuthe ngcembe ukuya kwindawo ephantsi kakhulu kwiiveki ezilishumi elinesithandathu, ukuyityhalela ngaphandle kwe-crypto rankings emihlanu ephezulu, njengoko i-capitalisation yayo yemarike yehla yaya kwi-50 yeebhiliyoni zeedola.
Okwangoku, njengoko uCardano ezama ukuba ngumncintiswano omkhulu kwi-DeFi / Smart Contract space, uSolana uye weba ukukhanya emva kokunyuka kwe-meteoric ngo-2021. USolana ngoku ubambe inombolo ye-5 kwindawo ephezulu ye-crypto rankings emva kokudlula i-ADA ngaphezu kwe-10 yeebhiliyoni zeedola.
Amanqanaba angundoqo eCardano ukuze abukele - ngoNovemba 29
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-ADA iye yahlala kwi-bearish bias ukusukela oko yavala i-3.160 yeedola ekuqaleni kukaSeptemba. I-cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu ibethe kwiinyanga ezininzi eziphantsi kwe-1.417 yeedola izolo kodwa iphinde yanda kufuphi ne-$ 1.600 uphawu njengoko ihleli phantsi kokungaqiniseki okukhulu.
I-ADAUSD -Itshathi yemihla ngemihla kwiBinance. Umthombo: TradingView
Oko kuthethiweyo, kunye nokubuya okuncinci kwe-bullish kwimarike ebanzi, sinokubona ukuqhubeka kwe-bullish / ukubuyisela umva ukusuka izolo ukuya kwindawo ye-200 ye-SMA kwi-1.876 yeedola kwiintsuku ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 1.650, i- $ 1.700, kunye ne- $ 1.780, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 1.550, $ 1.500, kunye ne- $ 1.445.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.56 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeCardano: $ 52 billion
ICardano Dominance: 2.03%
tags ADA, Cardano, Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lobuchwephesha
Ixabiso leCardano: Umzuzu wokuGqibela njengeeBhere 'kunye noxinzelelo lweeBulls kwi-Equilibrium
Uhlalutyo lwamaxabiso e-ADA-Okthobha 19
Ukuphuma kwinqanaba le-2.30 lokumelana nenqanaba kunokutyhala ingqekembe iye kwi- $ 2.68 nakwi- $ 3.0. Kwelinye icala, ukuphuma kwinqanaba lokuxhasa i- $ 1.87 kunganciphisa ixabiso liye kuma- $ 1.64 kunye ne- $ 1.46 kumanqanaba. Nangona kunjalo, isalathiso samandla esihambelanayo sikumanqanaba angama-40 esalatha ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Intengiso yeADA / USD
Amanqanaba okumelana: $ 2.30, $ 2.68, $ 3.0
Amanqanaba enkxaso: $ 1.87, $ 1.64, $ 1.46
I-ADA / i-USD yexesha elide: Ukuma
ICardano kukuhamba okujikelezayo kumbono wexesha elide. I-crypto yehliselwe kwinqanaba le-1.87 yeedola kwaye umfutho wabathengisi wasilela. Iinkunzi azinalo uxinzelelo olwaneleyo lokunyusa ingqekembe ngaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 2.30. Le meko ikhokelele ekuhambeni okuphakathi kwe- $ 2.30 yenqanaba lokumelana kunye nenqanaba lenkxaso le- $ 1.87.
Itshathi yemihla ngemihla ye-ADAUSD, Okthobha 19
Amaxesha ali-9 e-EMA axhumene namaxesha angama-21 e-EMA ngelixa ixabiso lihamba ngaphezulu kwee-EMA ezimbini. Ukuhamba ngokuhamba kuya kuqhubeka de kubekho ukuqhekeka emazantsi okanye emantla. Ukuphuma kwinqanaba le-2.30 lokumelana nenqanaba kunokutyhala ingqekembe iye kwi- $ 2.68 nakwi- $ 3.0. Kwelinye icala, ukuphuma kwinqanaba lokuxhasa i- $ 1.87 kunganciphisa ixabiso liye kuma- $ 1.64 kunye ne- $ 1.46 kumanqanaba. Nangona kunjalo, isalathiso samandla esihambelanayo sikumanqanaba angama-40 esalatha ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
I-ADA / i-USD yeXesha eliPhakathi lokuHamba: UkuHamba
ICardano yayihleli kwitshathi yeeyure ezi-4 kwiveki ephelileyo. Ixabiso liboshwe ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne- $ 2.30 kunye nenqanaba leNkxaso le- $ 1.87, oku kunokuba ngenxa yobuthathaka kwiinkunzi zeenkomo kunye neebhere. Ukuguquguquka okuncinci kunokuqhubeka kwimarike yaseCardano kude kubekho ukuqhawuka.
Itshathi ye-ADAUSD yeeyure ezi-4 <Okthobha 19
Amaxesha ali-9 ama-EMA aluka malunga namaxesha angama-21 ama-EMA kunye nexabiso le-ADA athengisela ii-EMA ezimbini. Ixesha lesalathiso samandla ahlobene namanqanaba angama-14 akumanqanaba angama-40 akhomba ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
tags I-ADAUSD, Marketing, Uhlalutyo Technical
Ixabiso leCardano: Ukunyusa uxinzelelo lweebhere, i- $ 1.87 inokuthi ingene
Uhlalutyo lwamaxabiso e-ADA-Okthobha 12
Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 1.87 liphinde lafunyanwa, linokungena ngaphakathi, kwaye libonakalise ixabiso kwi $ 1.64 nakwi- $ 1.46. Kwimeko apho ukukhula kweenkunzi kuya komelela kwaye inqanaba lokumelana ne- $ 2.30 lingene, emva koko kuvavanywa i- $ 2.68 kunye ne- $ 3.0.
I-ADA / i-USD yexesha elide iTrendar: Bearish
ICardano i-bearish kwimbono yexesha elide. Abathengisi belawula intengiso ye-crypto ngaphezulu kweeveki ezintathu. Ngeli xesha, abathengi babephikisana nabathengisi; imeko ikhokelela kurhwebo oluhlukeneyo. Ixabiso lehlile kwaye laguqula amanqanaba enkxaso yangaphambili ye- $ 2.68 kunye ne- $ 2.30 yokuxhathisa. Ixabiso lixabisa ngaphakathi kwe- $ 2.30 kunye ne- $ 1.87 yamanqanaba amaxabiso.
Itshathi yemihla ngemihla ye-ADAUSD, Okthobha 12
Amaxesha ama-9 ama-EMA awela amaxesha angama-21 e-EMA ngelixa ixabiso lithengiswa ngaphantsi kwee-EMA ezimbini. Namhlanje, ingqekembe iqala kwimakethi yaseCardano ngekhandlela lemihla ngemihla elingaphantsi kwexabiso le- $ 2.30. Ukwehla okuthe kratya kwixabiso leCardano kulindeleke. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 1.87 liphinde lafunyanwa, linokungena ngaphakathi, kwaye libonakalise ixabiso kwi $ 1.64 nakwi- $ 1.46. Kwimeko apho ukukhula kweenkunzi kuya komelela kwaye inqanaba lokuchasana le- $ 2.30 lingene, emva koko kuvavanywa i- $ 2.68 kunye ne- $ 3.0.
I-ADA / i-USD yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukuthwala
UCardano wayenomdla kwitshathi yeeyure ezi-4 kwiveki ephelileyo. Ixabiso laqhekeza inqanaba lokumelana ne- $ 2.30 kwaye yayijongise kwinqanaba lokumelana ne- $ 2.68 ngaphambi kokuba iphazanyiswe ziibhere. Nge-21 kaSeptemba, abathengisi bayichasa intshukumo ye-bullish. Ixabiso libuyiselwe ezantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 2.30 yehla ukuya kuthi ga kwinqanaba le- $ 1.87.
Itshathi ye-ADAUSD yeeyure ezi-4, ngo-Okthobha u-12
Amaxesha ali-9 i-EMA iwele ngaphantsi kwamaxesha angama-21 ama-EMA kunye nexabiso le-ADA athengisa ngaphantsi kwee-EMA ezimbini. Ixesha lesalathiso samandla ahlobene namanqanaba angama-14 akumanqanaba angama-20 akhomba ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Cardano to Partner with Chainlink for Better Smart Contractality function
Ukuhlaziywa: 27 Septemba 2021
I-IOHK ibhengeze ubuhlakani kunye nothungelwano lwe-blockchain oracle yenethiwekhi kwi-Chainlink yayo eqhubekayo ICardano (ADA) Ingqungquthela 2021.
Ngokusekwe kwisibhengezo, ubuhlakani buya kuvumela uCardano ukuba adibanise ii-oracle ze-Chainlink ekuxhaseni abaphuhlisi njengoko beqala ukwakha ii-Smart Contracts (SC) zezicelo ezisemthethweni (DeFi). Oku kuza emva kokuphuculwa kweAlonzo Mainnet ngoSeptemba 12.
Ukunika ingxelo malunga nolu phuhliso lutsha, iNtloko yeBlockchain Partnerships eChainlink Labs uNiki Ariyasinghe uqaphele ukuba inethiwekhi ye-oracle ine-a "Inkulu kakhulu intlonipho ngendalo yeCardano," ngakumbi iqela lobuchwephesha beprojekthi kunye nobume bokusebenzisana noluntu lwe-ADA.
Isiphathamandla seChainlink songeze ukuba sikholelwa ukuba ubuhlakani benziwe ngexesha elifanelekileyo ngokujonga ukumiliselwa kweSivumelwano seSmart kutshanje, ngelixa iChainlink iququzelela ukuhanjiswa kwedatha yobungqina obuphosakeleyo ukusuka kwimithombo yeetroniki ukuya kwi-chain ye-SC. UAriyasinghe wathi:
“Oku okuninzi kuza ngexesha. Ngokucacileyo uCardano unexesha elandisiweyo apho wayenamachaphaza ohlaziyo ahlukeneyo, kwaye okona kutshanje nguAlonzo-ngenene malunga nokwenza izivumelwano ezifanelekileyo. Ke thina, eli lixesha elifanelekileyo lokuzibandakanya nezinto eziphilayo zeCardano. ”
Okokugqibela, u-Ariyasinghe wanyanzelisa ukuba ukudityaniswa kunokuvumela amakhulu ezigidi zeedola ukuba zifumaneke kwiCardano Protocol, ngakumbi ngokubhekisele kushishino lweDeFi.
Amanqanaba aphambili eCardano ukuba abukele-ngoSeptemba 27
I-ADA iyaqhubeka nokurhweba ngendlela engakhethi cala ngaphandle kokuphinda-phinde ukuziva unomdla kwimarike ebanzi. I-cryptocurrency yesithathu ngobukhulu ihlala ithintelwe phantsi komgca wokumelana ne- $ 2.300 phakathi kokungena okuphakathi kwevolumu yorhwebo (kokubini kunyusa kunye ne-bearish).
I-ADAUSD-Itshathi yeeyure ezi-4
Le ntshukumo isecaleni iza njengesiphumo sedabi eliqhubekayo phakathi kweebhere kunye neenkunzi zeenkomo, kunye nabangaphambili abafuna ukugcina i-cryptocurrency ecaleni kwetripwire ehla kwaye eyokugqibela izama ukunyuka ibuyele ngaphezulu kweyona ndawo ibalulekileyo ye- $ 2.470.
Kuze kube yilapho sibona ikhefu kwi- $ 2.400 - $ 2.350 ye-pivot zone, i-ADA iya kuhlala ihlala kwindawo eboshwe kuyo phakathi kwe- $ 2.300- $ 2.200.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 2.300, i- $ 2350, kunye ne- $ 2.400, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 2.200, $ 2.100, kunye ne- $ 2.000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.95 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeCardano: $ 71.6 billion
ICardano Dominance: 3.67%
Inqanaba lentengiso: #3
tags ADA, Cardano, Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa
Umphathi weCardano uSlams Token Burning, uyalingana nokweba ukutya
Ukuhlaziywa: 20 Septemba 2021
Umseki kunye neCEO ye ICardano (ADA), UCharles Hoskinson, uthethe ngokuchaseneyo nombono otshabalalisayo woqoqosho lwe-deflationary kwishishini le-cryptocurrency. Umnumzana Hoskinson wenza imeko yakhe ephikisayo yaziwa kwi-AMA yamva nje (ndibuze nantoni na) kwiseshoni ku-YouTube, ngokuthelekisa umkhuba wokutshiswa kwethokheni nokweba ukutya. Uye waphawula ukuba lo msebenzi ubonakalisa ukuhaha nokungazi kwabantu, echaza ukuba:
“Siyavuya kuba ungasixelela ukuba kufuneka sonakalise imali yabanye abantu ukuze wenze imali ethe kratya emva koko uthengise i-ADA udlulele kwenye into.
Ukutshiswa kwethokheni okanye umqondiso wokuchasana kuphakamisa ukususa isixa esithile samathokheni kunikezelo olujikelezayo lwenza ukuba iithokheni ezikhoyo zibaluleke ngakumbi. I-Ethereum (i-ETH yeedola) yaba yeyokugqibela ukujoyina i-bandwagon yethokheni yentsingiselo yasemva kweLondon Hardfork, kwaye sele itshisile ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi ezixabisa i-Ether ukusukela ekuphunyezweni kwe-Eip-1559. Ngaphandle kwe- $ ETH, iBinance ikwatshisa ukuhanjiswa kweBNB rhoqo ngekota. ”
UHoskinson unomkhwa wokuba krwada ekugxekeni kwakhe kwaye akanciphisi magama nangona kukho ukugxekwa nokugxekwa akufumanayo. Nangona kunjalo, i-CEO ngaphambili yayikhuthaza abaphuhlisi ukuba benze ifayile ye- "Ubungqina Bokutsha" evumela abasebenzisi ukuba balayishe i-ADA yabo kwaye bayitshabalalise ngokusisigxina. Oko kwathethileyo, uqaphele ukuba abo banomdla bakhululekile ukuba batye kodwa kungabikho namnye umntu ohlawula iindleko.
Amanqanaba aphambili eCardano ukuba abukele-ngoSeptemba 20
Kunye noninzi lwentengiso yemali yedijithali ngoMvulo, i-ADA iphantsi koxinzelelo lwe-bearish, njengoko eyesine ngobukhulu ye-cryptocurrency yehle nge -10% ngaphantsi kwenkxaso ebalulekileyo ye- $ 2.300. UCardano uhlala erekhodishe ezantsi ukubuza okanye ukwehla komkhondo kwimpelaveki.
Oko kwathethi, iibhere kubonakala ngathi zithumele ukwehla kwinqanaba leedola i-2.100. Akucaci ukuba le nto yeza ngenxa yokuphinda ubume be-bullish okanye ukubekwa kwakhona kwe-bearish ukuze kwehle ukuhla. Abathengi kufuneka basebenzise umonde ukubona ukuba i-ADA iphinda ivuke ngaphezulu kwe- $ 2.200 kwiiyure ezizayo, ezinokubuyisela umbono othobekileyo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 2.200, i- $ 2300, kunye ne- $ 2.350, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 2.100, $ 2.000, kunye ne- $ 1.950.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.98 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeCardano: $ 67.8 billion
ICardano Dominance: 3.4%
Inqanaba lentengiso: #4
Iirekhodi zikaCardano ngaphezulu kwesicelo seKhontrakthi eSmart kwiintsuku ezine
Ukuhlaziywa: 17 Septemba 2021
Ukulandela ukuphuculwa kweAlonzo Mainnet kutsha nje, ukuhambelana kwezivumelwano zeSmart (SC) kuyinyani ICardano (ADA) ababhekisi phambili. Ukuphuculwa kuvumela abaphuhlisi ukuba benze usetyenziso olusasazwayo (dApps) kunye neenkonzo zezemali ezisemthethweni (DeFi).
Ngokuyilwa kweeprojekthi ezintsha ze-SC kutshanje, inethiwekhi ingangqina ukunyuka okukhulu kwee -apps ezintsha. Iingxelo zibonisa ukuba inethiwekhi ibhalise ngaphezulu kweeprojekthi zoQhakamshelwano nge-Smart kwiiyure zokuqala ezingama-100 emva kokuphuculwa. Le ntsebenzo inomtsalane ikhule ngokubonakalayo kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo. Ngexesha lokushicilela, Inani lilonke le-SC kwinethiwekhi limi kwindawo yeeprojekthi ezingama-2,280.
Ngelixa uninzi lweeprojekthi ze-SC zikhona “Itshixiwe ixesha,” Oko kuthetha ukuba abaphuhlisi bagcina indawo ngaphambi kokukhutshwa kwezicelo zabo ezinikezelweyo, kubonisa ukuba abaphuhlisi abaninzi bonwabile ukumilisela iiprojekthi ze-SC kwinkqubo ye-Cardano ecosystem.
Ikhontrakthi yexesha elifanelekileyo ivumela abaphuhlisi ukuba bafumane indawo kwinethiwekhi kangangexesha elichaziweyo, ngaloo ndlela bevumela ukuba bagxile kuphuhliso lweeprojekthi zabo zeSC.
Nangona kungakhange kubekho ziphumo zingxamisekileyo kolu phuhliso kwi-ADA, ithokheni yemveli yaseCardano, akukho mathandabuzo okuba iya kuba nefuthe lexesha elide kunye nexabiso elihlala lihleli kwixabiso ledigital currency.
Amanqanaba aphambili eCardano ukuba abukele-ngoSeptemba 17
Ukulandela ukudityaniswa ixesha elide phakathi kwe- $ 2.420 kunye ne-2.350 yeedola ukusukela ngoMvulo, uCardano ekugqibeleni wathumela umlenze obukhali ngokuchasene ne- $ 2.600 yokuchasana ngoLwesithathu. Nangona kunjalo, le nto ilungileyo iye yahlaselwa yinqanaba lokumelana nayo, eyithumela ukuba ibuyele umva kwindawo yokudityaniswa. Lo mzuzu we-bearish uza phakathi kokudityaniswa kwemarike ngokubanzi.
Silindele ukubona ukwehla okuqhubekekayo kwisiseko se- $ 2.350, apho ukubuyela kwakhona okuqinisekileyo kunokuphinda kwenzeke. Ukuwa okuzinzileyo ngezantsi kwale ndawo kungathintela ukubuyela ngokukhawuleza kweempawu zengqondo ze- $ 2, okwenza lo mmandla ube yindawo ebalulekileyo yokuzikhusela yeenkomo kwixesha elisondeleyo.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 2.420, i- $ 2471, kunye ne- $ 2.600, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 2.350, $ 2.300, kunye ne- $ 2.200.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.13 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeCardano: $ 75.8 billion
ICardano Dominance: 3.56%
tags ADA, Cardano, Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lweTecnicalanal
ICardano iza phantsi komlilo emva kwemicimbi ye-Concurrency kwiAlonzo Testnet
Ukuhlaziywa: 6 Septemba 2021
ICardano (ADA) Ize phantsi kokugxekwa kulandela iingxelo zomcimbi we-concurrency ofunyenwe kwi-Alonzo testnet. Iqela laseCardano labhengeza kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuba ukusebenza kweSivumelwano seSmart kudityanisiwe kwiAlonzo Testnet. Uphuculo lweAlonzo Mainnet luya kudlala ngoSeptemba 12.
Nangona kunjalo, umsonto weTwitter wakutshanje ngu-Ethereum othanda u-Anthony Sassano, oqulethe izikrini, waveza ingxaki yemali kwi-Cardano-based decentralised exchange (DEX), Minswap. Iingxelo zibonisa ukuba uMinswap waba yi-Dapp yokuqala eyaphehlelelwa kwi-Cardano testnet ngo-Septemba 4.
Iingxaki zekhontrakthi zibonakala kwizenzo ezingavumeli ukusetyenziswa okuninzi ngabaphuhlisi ngenkqubo okanye iprotocol ngaxeshanye. KwiCardano, lo mbandela ubangelwa kukusilela kwe- "Umatshini oqinisekileyo weCardano"-Ngokufanayo kwi-Ethereum Virtual Machine-enika iSivumelwano seSmart ukusebenza okuhambisanayo.
Esinye sezikrini esithunyelwe nguSassano sigxininise impazamo yomthengi ngelixa bezama ukutshintsha amathokheni. Amanye amalungu oluntu akhathazekile kukuba iMinswap inokusingatha kuphela intengiselwano ibhloko nganye, iyenza ukuba ingasebenzi kakuhle.
Ethetha ngale ngxaki, umsunguli weCardano uCharles Hoskinson uqaphele ukuba i-concurrency flak ephoswa apha yayikukungathembeki kweprojekthi. U-Hoskinson wongeze ukuba ukwakha inkqubo esasazwayo, esasazekayo ayisiyiyo ukuhamba epakini.
Kwakhona, i-IOHK ibhale ukugxeka njengolwazi olungelulo malunga nencwadi kaCardano, icaphula iSundaeSwap Labs njengomzekelo.
Amanqanaba aphambili eCardano ukuba abukele-ngoSeptemba 6
Ngaphandle kobukho obomeleleyo be-bullish kwimarike ye-crypto, i-ADA ayinakubonakala ngathi ithumela i-goodish push ngaphezulu kwe-3 yemakethi. I-cryptocurrency yesithathu ngobukhulu iwele ukusuka kwi- $ 3 uphawu lwangoLwesihlanu odlulileyo ukuya kwinkxaso ebalulekileyo ye- $ 2.8000. I-ADA yathumela isaphulelo esivela kule nkxaso kodwa yamiswa kwiindlela zayo ezijikeleze i-2.9500 yeedola.
I-cryptocurrency iwele kwakhona, kutsha nje, kwinkxaso ebaluleke kakhulu kunye nokulungiswa okubanzi kwemarike okubangelwe yiBitcoin. Ngokubuya kweemarike ngokubanzi kungekudala, i-ADA kufuneka icofe kulolo gxobhozo kwaye icace ukunganyangeki kwe- $ 3. Ukungaphumeleli ukwenza njalo kunokuthintela ukuhamba kwayo kwi-2.9500 yokuchasana ne- $ 2.8000.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 2.9500, i- $ 3.0000, kunye ne- $ 3.2000, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 2.8000, $ 2.6000, kunye ne- $ 2.4705.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.41 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeCardano: $ 90.5 billion
ICardano Dominance: 3.73%
ICardano Foundation ityhiliza ukuThobela okungcono ngokuDityaniswa kokuQinisekiswa
Ukuhlaziywa: 30 Agasti 2021
Isiseko seCardano sibonakala ngathi sisebenza nzulu kwindlela efanelekileyo yokuthotyelwa kwemigaqo kulandela isibhengezo samva nje sokudibanisa inkampani eChasene nokuSetyenziswa gwenxa kwemali yohlalutyo yeCoinfirm kwinkqubo yendalo yeCardano.
U-Coinfirm uqinisekisile uphuhliso ngoLwesibini odlulileyo ngesibhengezo sokuhambisa inkqubo ye-AML / CFT yohlalutyo ukuze kuqinisekiswe iindlela zokuthobela ezenziwa nguCardano ngezikhokelo ze-FATF's (Financial Action Task Force), 6AMLD, kunye neminye imigaqo.
Ngale ntshukumo, ibhloko ye-blockchain kufuneka itsale ukuzithemba okuthe kratya koorhulumente, amaziko, imibutho elawulayo kunye nabasebenzisi.
Nangona kunjalo, intshukumo yakutshanje ijongene nenkcaso evela kwamanye amalungu oluntu e-cryptocurrency akholelwa ukuba iyayichasa imigaqo esisiseko yemigaqo ekhokelayo ye-crypto.
Ukuphawula ngokuhamba, i-crypto eqinile u-Weiss Crypto uqaphele ukuba intshukumo yayiyi "Konke-jikelele uphuhliso oludanisayo" ethanda abalawuli. Ifemi ichaze kwi-tweet ukuba uCardano akanalo ishishini elisebenzisa ukuthotyelwa kommiselo, endaweni yoko, iiprojekthi ezizimeleyo kwi-blockchain kufanele. Ixhala eliqatha lokuba ukuthotyelwa kwemigaqo kuyayityhalela ekubeni yinkqubo yezemali yokuthintela ulawulo. U-Weiss Crypto uthumele ukuba:
"Inqaku elipheleleyo [lobuchwephesha be-blockchain kunye ne-cryptocurrensets] kukwakha umaleko omtsha wezezimali nezoqoqosho, okhululekileyo kulawulo nengcinezelo yabo bazise uqoqosho lwehlabathi kwinqanaba lokungaphumeleli, banako ukugcinwa kuphela ngokugqithileyo kwaye ungenelelo olucwangcisiweyo olusembindini. ”
Amanqanaba aphambili eCardano ukuba abukele-Agasti 30
ICardano (ADA) ihleli kumandla asecaleni ngoMvulo njengoko imarike ye-cryptocurrency ebanzi ibonakalisa ukuxhonywa kwe-bearish. Oko kwathethileyo, iinkunzi zeenkomo zikwazile ukugcina ixabiso lesithathu ngobukhulu kwi-imali yedatha ngaphezulu kwe-2.8000 yeedola yenkxaso ngokudityaniswa.
Oko kwathethi, silindele ukubona ukubuyiswa kwe-bullish kwiiyure ezizayo njengoko imisebenzi yokunyusa ingena kwintengiso ebanzi. Okwangoku, ukudipha okuzinzileyo ngezantsi kwenqanaba le-2.8000 yeedola kubonakala kungenakulindeleka ukuba kunikwe indibaniselwano yemidlalo ejikeleze loo mgca (i-50 SMA, iiveki ezintathu ezonyukayo, kunye nomgca wenkxaso).
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 2.8000, i- $ 3.0000, kunye ne- $ 3.2000, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 2.4507, $ 2.4000, kunye ne- $ 2.3000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.16 zezigidi
ICardano Dominance: 4.16%
tags ADA, Cardano, Cryptocurrency, iindaba
ICardano yokuSungula isiGuquli se-ERC-20 phakathi kweNtengiso-yoLungiso olubanzi
Ukuhlaziywa: 27 Agasti 2021
ICardano (ADA) ibhengeze ukuba iceba ukwazisa isiguquli se-ERC-20 ukunika usetyenziso lwee-asethi ezisekwe kwi-Ethereum kwi-testnet yayo. Ngokwesibhengezo sevidiyo esithunyelwe yi-IOHK, uvavanyo lwe-ERC-20 lokuhambelana kufuneka lwenzeke kwiveki ezayo kwaye lunokuba lutshintsho lomdlalo obalulekileyo weCardano ukuba ngaba lungavavanya uvavanyo.
NgokukaFrancisco Landin, ovela kwiqela lezorhwebo leArch Case, isiguquli siza kusebenza njengesinxibelelanisi phakathi kwenethiwekhi ye-Ethereum kunye neCardano kwaye sivumele intshukumo engenamthungo yeempahla ezisekwe e-Ethereum. Le ntshukumo ibandakanya ukuhamba kwemali kunye nezinye ezininzi ukusebenzisa ii-ERC-20 zokusebenza ezisekwe.
Ngokwesibhengezo, esi sixhobo setransekshini siyi Isixhobo sokuzenzela ukusebenziseka ngokufanelekileyo kunye nokusetyenziswa ngokubanzi. Kukho ukugxila ekutsaleni abasebenzisi bamaqonga amakhulu ngeendlela eziqhelekileyo.
Olu phuhliso luza phakathi kochulumanco olujikeleze inkqubela phambili yenethiwekhi yeCardano kunye nophuhliso lwayo. Uthungelwano kutshanje lubhengeze ukumiliselwa kwe-testnet yezivumelwano ze-Smart, kunye nokuhlaziywa kwe-mainnet okusetelwe kamva kulo nyaka.
I-ADA igqwese kakhulu kwezinye ii-cryptocurrensets kwaye irekhode irekhodi elitsha. ICardano kunye ne-cryptocurrency yayo yemveli yenze ngokungaqhelekanga ngo-2021, nge-ADA ingomnye wabadlali abaphezulu beemarike. Kwakhona, inzala yomntu ngamnye irekhode ukonyuka okukhulu kulo nyaka, ngokukhangelwa kwe-ADA kufikelela kwinqanaba eliphezulu lokurekhoda.
Amanqanaba aphambili eCardano ukuba abukele-Agasti 27
Emva kokufumana amanqaku ambalwa ngezantsi kwe- $ 3 ngoMvulo, i-ADA yawela kulungiso lwe-bearish phakathi kokuhla kweentengiso. I-cryptocurrency yesithathu ngobukhulu ibhale idiphu engaphantsi kwenqanaba le- $ 2.8000, apho yawela kwindibaniselwano emfutshane phakathi kwe- $ 2.8000 kunye ne- $ 2.6000. Ukulandela indibaniselwano emnene, i-ADA yaphinda yaphindaphinda ngoMeyi wayo ophakamileyo nge-2.4705 yeedola yaza yakhutshwa kwangoko, ibonisa inkxaso esempilweni kwinqanaba.
Oko kwathethi, i-cryptocurrency ibuyile yangena kwindawo eyi-2.6000 yeedola njengoko amandla e-bearish ebuthathaka. Ikhefu elingaphezulu koxinzelelo lwe- $ 2.8000 kufuneka lubonakalise ukuphela kolungiso.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.02 zezigidi
Imali eyintloko yentengiso yeCardano: $ 84 billion
ICardano Dominance: 4.15%
Iirekhodi zeCardano Massive Rally phakathi koTyalo mali oluhlaziyiweyo
Ukuhlaziywa: 23 Agasti 2021
Utyalo mali lwabuyela emarikeni kwakhona, kwaye ngeli xesha liqhuba ICardano (ADA) ngaphezulu. Ngelixa iBitcoin ibuyisile i-50k ye-linek emva kwe-3% rally ebangele ukonwaba kwintengiso, uCardano webe ukukhanya nge-12% ukunyuka ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo kunye nokuthengisa kwi- $ 2.8200.
I-rally yakutshanje ibeke i-ADA ngokuqinileyo kwindawo yesithathu kwindawo ephezulu ye-cryptocurrency.
Oko kwathiwa, abatyali-mali banamehlo abo kwi- $ 3 mark, enokubangela i-ADA enkulu. Iqonga le-analytics yeqonga leSantiment ithi ukonyuka kwamaxabiso ngaphezulu kweedola ezi-3 kunokwenzeka kakhulu phakathi kokuphakama kovuyo lotyalo mali kwintengiso. Umboneleli wedatha uqaphele ukuba:
Ukukhankanywa kokubini kwe #Cardano hashtag kunye ne- $ ADA hashtag kuqhume ngokupheleleyo nge #crypto asethi entsha #AllTimeHigh ye- $ 2.63. Isihlwele kunye nokuziphatha kwayo kweli nqanaba kuya kuba nesandla esikhulu ekubeni amaxabiso ayaqhubeka ukuya kuthi ga kwi-3.00 yeedola nangaphaya. ”
Le mbono yotyalo mali izayo iza phakathi kweAlonzo ifolokhwe enzima ecwangciselwe ukumiliselwa ngoSeptemba 12. IAlonzo ifolokhwe enzima iya kunika iCardano blockchain ukuhambelana okulindelekileyo kweSivumelwano seSmart. Olu kongezo kufuneka lwandise ngokubonakalayo amandla e-blockchain ekusingatheni iiprojekthi ze-DeFi, ii-NFTs, kunye nezinye iiprojekthi ezifanayo.
Amanqanaba aphambili eCardano ukuba abukele-Agasti 23
Ukusukela oko ibuyise unyawo ngaphezulu kwe-Meyi ATH kwi- $ 2.4705, i-cryptocurrency yesithathu ngobukhulu ikwimo yokufumanisa amaxabiso njengoko isondela kwindawo ephambili ye- $ 3. Ngelixa iimeko zokurhweba zisondela kwimimandla eshushu, i-ADA inegumbi elaneleyo lokutyhala ngaphezulu kweempawu ezi- $ 3 ngaphambi kokulungiswa kokuqinisekisa.
Nangona kunjalo, i-axis eyi- $ 2.5000 ihlala iyinqanaba elibalulekileyo le-ADA lokuqhubela phambili. Ukuwa ngaphantsi kwalomgca kunokumisa iinzame zokunyusa umgangatho.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 3.0000, i- $ 3.2000, kunye ne- $ 3.5000, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 2.8000, $ 2.6500, kunye ne- $ 2.5500.
ICardano Dominance: 4.19%